SteamOS inoramba ichiita zvirinani kunyangwe ichiita sekuneta | Linux Vakapindwa muropa
Steam OS Yakatanga seprojekti inonakidza, asi Valve inoita kunge yanga ichingoisa parutivi nekuda kwekusave nekubudirira neSteam Machine yayo uye nechishuwo chekugadzira chikuva chemutambo wevhidhiyo chine simba seiyo PlayStation kana iyo XBox, asi zvichibva pakugovera kwayo. GNU / Linux. Nekudaro, iyo inozivikanwa sisitimu yekushandisa yemultimedia uye vhidhiyo mitambo inoenderera nekuvandudza chinyararire. Valve inoenderera neayo Steam chitoro uko kune akawanda uye akawanda mazita eLinux uye zvinoita sekunge haina kurasikirwa zvachose kufarira SteamOS ...
Iyo itsva SteamOS iyo ichiri Beta, kunyanya iyo vhezheni Steam OS 2.115, inoramba ichivandudza uye yagadzirisa zvakanyanya. Saka ini ndinovimba kuti yekupedzisira vhezheni yeiyi nyowani yekusunungurwa ichauya munguva pfupi. Ichokwadi ndechekuti runyorwa rwekuvandudza rwakakura uye harusi rwezvakawanda zvidiki diki, asi zvimwe zvacho zvakadzika sezvaungaona. Zvakanaka, zvinonyevenutsa kuziva kuti kunyange hazvo chirongwa ichi chisati chataurwa nezvacho nguva pfupi yadarika sepakutanga, ichiri kuenderera uye nenhanho yakanaka yekusimudzira.
Kumwe kwekuvandudzwa kwakakosha kwakaitika kwave iko shanduko dzakaitwa nevagadziri vachifambisa iyo SteamOS dhatabhesi kuenda Debian 8.8, pamusoro pekuvandudza kune iyo Linux kernel 4.11. Ehezve ndiko kugoverwa uko chikamu chemifananidzo chinofanira kumira uye nekuda kweizvozvo ivo vakagadziridzawo MESA, vatyairi veNVIDIDA, madhiraivha e AMD (ayo akachinjwa nevaridzi ve AMDGPU-PRO kuti vabudirire zvakanyanya) uye zvakare Vulkan uye iyo Wayland giraidhi server.
Pave paine zvakare nzvimbo yekugadzirisa zvisingaverengeke mapakeji uye kugadzirisa mamwe kusagadzikana uye notupukanana kubva kushanduro dzakapfuura. Shanduko dzeKuvaka 115 2017-05-18 yeSteamOS yaunogona kuona zvizere mune izvi batanidza kune yepamutemo webhusaiti yenharaunda yeSteam. Idzi dzimwe shanduko dzinokanganisa kuwanda kwemapakeji, kubva ku vim, unzip, kune iyo NTFS mutyairi ntfs-3g, MySQL, mamwe maraibhurari, Jasper, git, mamwe madhiraivha echishandiso kana Apache ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SteamOS inoramba ichiita zvirinani kunyangwe ichiita sekuneta
Kuwana "Hafu-Hupenyu 3" kunze chete kwechinguva pane SteamOS. Ndiyo chete nzira vanhu vanoishandisa.
Ehe, dai paine mamwe mazita uye pamusoro pese kubviswa… Zvichida kubudirira kwaSteamOS uye Steam Machine kwaizochinja.
Kwaziso uye nekutenda nekutitevera.
Ndizvozvo, kiyi ndeyekuti vanoiburitsa kweanenge mavhiki maviri kana mwedzi chete kune veGNU / Linux uye Steam OS vashandisi
Chingave chakakosha kusundidzira kweFeral uye mamwe matsva uye maAAA makambani kuburitsa mimwe mitambo (vachishandisa Unreal Injini, Tsime 2, CryEngine, nezvimwewo)
Chokwadi ndechekuti kana AMD yakanaka mune linux, iyo windows theme ichave 0 nekuti ini ndinoda yangu xubuntu uye steamOS zvimwe zvandave nazvo kwenguva yakareba (ndachinja kuita ryzen uye zvinondipa chimwe chinhu chidiki chekungova nacho chete xubuntu kana steamOS »izvo zvandinongoshandisa izvi kutamba»)
Izvo hazvina kukundikana, kutaura zvazviri zvichiri kutanga. Zvinoenderana neValve iri chirongwa chenguva yakareba, sezvawakati ichiri mubeta. Ivo havasi kukurumidza, nekukurumidza kana gare gare inozove inonyanya kufarirwa.
Hongu, haugone kuve nekukurumidza nekuti ini ndinokuona uchitaridzika zvakanaka, uye nhanho nhanho uchivhura mukaha pakati pevazivikanwe
Pane chero munhu anoziva uko Kwazvino Kugovaniswa kunogona kutorwa kubva ku ??? salu2